Edemede Lindsay Tjepkema na Martech Zone |
Edemede site na Lindsay Tjepkema
Lindsay Tjepkema bụ onye isi na ngalaba-onye guzobere Casted, nke izizi azụmaahịa azụmaahịa wuru gburugburu pọdkastị ndị ama ama. N'ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe na azụmaahịa B2B, gụnyere ịme ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ ya, ọ bụ onye ndu dị ike nke nwere nnukwu ụlọ ọrụ na-eto eto na ndị otu azụmaahịa na mpaghara na nke ụwa. Mgbe Lindsay mechara bido Podcast a ma ama maka ụlọ ọrụ azụmaahịa zuru ụwa ọnụ, ọ matara agụụ ya maka ezigbo mkparịta ụka. Nke a dugara ya na ntọala Casted iji nyere ndị ahịa aka mepee ọdịnaya ha niile site na ijikwa ike nke pọdkastị. Companylọ ọrụ ahụ enwetawo ngwangwa ngwa ngwa n'etiti ụdị ndị chọrọ ịmepụta njikọ dị ukwuu na ndị na-ege ha ntị site na mkparịta ụka ziri ezi.